MACLUUMAADKA SAWIRADA IYO SAWIRADA CUDURKA SHEPHERD SHEPHERD DOG - EEYAHA
Macluumaadka Sawirada iyo Sawirada Cudurka Shepherd Shepherd Dog
'Kani waa eeygayga magaciisu yahay Demon oo jira 2 sano. Isagu waa hufan, horyaal qaran oo badan Caucasian Shepherd Dog. Cinwaannada waxaa ka mid ah: Horyaalka Qaranka Ruushka, RKF Champion iyo Lithuania National Champion iyo kuwa kale. Wuxuu ku nool yahay Petlove Kennels, magaalada Jos, gobolka Plateau, Nigeria. Milkiilaha: Dr Olomu Segun Afolabi. Jinni waa qof weyn oo jilicsan, aad u awood badan oo dabeecad isku dheelitiran leh. '
Eyga Armenia Khobun
Eg adhiyaha Azerbaijan
Baararka (Caucasian) Eyga
Eyga Buugga Caucasian
Nagazi reer Georgia
Eyga Idaha Circassian
Ruushka Caucasian Ovtcharka
Eyga Buurta ee Ruushka
Adhijirka 'Caucasian Shepherd' wuxuu leeyahay indho madow oo qoto dheer oo qotodheer. Dhegaha ayaa si cufan loogu daboolay timo loogu talagalay dabool. Miskaha wax yar baa laga soo qaaday safka dhabarka. Dabada ayaa sifiican loogu daboolay baalal dheer oo timo culus. Afka hore waa dherer, toosan oo cufan. Cagaha ayaa weyn oo culus, oo timo u dhexeeya suulasha dhexdooda, oo bixiya dahaadh iyo difaac aad u fiican. Sanka waa madow oo caan ah oo sifiican loo furay, dulalka sanka waaweyn. Dharka qaro weyn, cufan, cimilada u adkaysta ayaa leh baalal badan oo si gaar ah waxtar ugu leh ka hortagga qabowga. Koofiyadaha eeyaha ayaa kafiican ka dibna jaakadaha dadka waaweyn. Midabbada way ku kala duwan yihiin cawlka, fawnka, tan, dusha, birta iyo caddaanka. FCI waxay mamnuucaysaa eeyaha buniga ah. Dalkiisa hooyo Caucasian Ovtcharka dhagaha dhagaha ayaa loo gooyay.
Ujeedada asalka ah ee 'Caucasian Shepherd' wuxuu ahaa inuu ilaaliyo xoolaha. Caadiga ah Caucasian Ovtcharka waa mid ku adkaysi leh, niyad adag oo geesinimo leh. Ilaa ay si hagaagsan u dhex galaan oo ay u tababaraan mooyee, Adhijirka 'Caucasian Shepherd' ayaa laga yaabaa inuu muujiyo dabeecad xun oo aan la maareyn karin. Waa mid geesinimo leh, feejigan, xoog badan oo adag. Ma aqbasho dad aysan aqoon oo waxay leedahay rabitaan xoog leh oo ay ku difaacdo. Wax kasta iyo qof kasta oo ka tirsan qoyska, oo ay ku jiraan carruurta, bisadaha, eeyaha kale, iwm, ayaa eeygan loo tixgelin doonaa inuu ka mid yahay qoyskiisa 'waana la ixtiraami doonaa lana ilaalin doonaa. Eygan looma daayo keligiis carruurta, maxaa yeelay haddii cayaartu noqoto mid aad u qallafsan, Caucasian Ovtcharka waxaa laga yaabaa inay dareento baahida loo qabo in la ilaaliyo ilmahaaga, waana laga yaabaa inay si ballaaran u sameyso. Waqti uma haysto shisheeyaha, laakiin waxay si diiran u salaami doontaa asxaabta qoyska. Waxay noqon kartaa mid ku xoog badan eeyaha kale ee aysan aqoon. Qaar ka mid ah fanaaniinta reer Jarmal waxay u shaqeeyaan eeyaha sidii ilaaliyeyaasha iyo ka-hor tagayaasha. Tani eey uma aha qof walba. Waxay u baahan tahay milkiile yaqaan sida loo muujiyo hoggaan adag oo diyaar u ah inuu waqti badan ku qaato is dhexgalka bulshada iyo tababarka. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhami waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexaa xeerarna waa la dejiyaa. Sababtoo ah a eygu wuu wargaliyaa xanaaqiisa ku saabsan cabaadka iyo aakhirka qaniinyada, aadanaha kale oo dhan WAA INAY uga sarreeyaan si ka sareysa eyga. Dadku waa inuu noqdaa kuwa go'aamada gaara, eeyaha maahan. Taasi waa sida kaliya ee xiriirka aad la leedahay eygaagu u noqon karto guul dhammaystiran.
Dhererka: 25 - 28 inji (64 - 72 cm)
Miisaanka: 99 - 154 rodol (45 - 70 kg)
Adhijirka reer Caucasian laguma talinayo nolosha guriga. Waxay ubaahanyihiin boos waxayna kufiicnaan doonaan ugu yaraan daarad weyn. Sababtoo ah jaakaddiisa qaro weyn ayaa si fiican u ilaalisa, waxay si farxad leh ula qabsan kartaa ku noolaanshaha dibedda haddii ay leedahay hoy ku habboon.
Noocani eeygu wuxuu ku habboon yahay qoys leh boosas badan oo ku hareeraysan guriga halkaas oo si nabadgelyo leh ugu socon kara aag furan. Marka aadan u shaqeyneynin ilaaliyaha xoolaha, waa in loo qaataa a maalin kasta, socod dheer halkaas oo eeyga looga dhigo cirib. Marna waa inaan la oggolaan in laga baxo qofka hortiisa hoggaanka haya hortiisa, sida maskaxda eyga uu hoggaamiyuhu ku hoggaaminayo jidka, hoggaamiyahaasina wuxuu u baahan yahay in uu noqdo aadanaha.
Waxaa jira laba nooc oo jaakad ah: mid gaaban iyo mid dheer. Koodhka noocyada timo dhaadheer ayaa u baahan burush soo noqnoqda, isagoo si gaar ah ugu fiirsanaya baraha ay isku dhici karaan. Noocyada gaagaaban ayaa u baahan qurxin ka yar, laakiin weli waa in la shanleeyaa oo la caddeeya.
Adhijirka 'Caucasian Shepherd' waa ilaaliyaha adhiga ee laga sameeyay taariikh-hore molosser taranka Caucasus oo ay soo saaraan xoolo dhaqatada deegaanka. Caucasians-ka waxaa loo isticmaalaa in idaha laga ilaaliyo ugaarsatada iyo tuugada. Eeyadan ayaa had iyo jeer soo jiita dareenka qof kasta sababo la xiriira tayada shaqooyinka muuqda iyo muuqaalka muuqda. La'aanta naadiyada xanaanada guryaha abaabulan iyo heerar qoran ayaa qayb ahaan sharraxaysa sababta Caucasian Ovtcharka ay ugu kala duwanaan jirtay nooc dal ilaa dal iyo xitaa deegaan ilaa degmo. Qarniyo badan, adhi ayaa ka jiray Caucasia, dhulka buuraleyda ah ee u dhexeeya badda Madow iyo Caspian iyo deriska la ah Turkiga iyo Iiraan. Eeyo la mid ah mas'uulkaan heer sare ah ayaa ka ilaaliyay adhigan dadka iyo xayawaanka ugaarsada ugu yaraan 600 sano. Adhijirka 'Caucasian Shepherd' wuxuu caan ka yahay Ruushka. 'Ovtcharka' waxaa loola jeedaa 'ido' oo af Ruush ah. Ruushka iyo qeybaha kale ee Midowgii Soofiyeeti ee hore, waxaa badanaa lagu muujiyaa bandhigyada eyga. Waddamada Hungary, Poland iyo Czech iyo Slovak Republics, barnaamijyo ballaadhan oo taranta ayaa hubinaya inuu weli ahaado eey caan ah, in kasta oo adeegsiga asalka ah ee ilaaliyaha idaha uu hoos u dhacayo. Caucasian Ovtcharka wuxuu yimid Bariga Jarmalka dabayaaqadii 1960s si uu ugu adeego sida eey ilaaliya xadka, gaar ahaan darbiga Berlin. Sannadkii 1989-kii, markii uu gidaarku soo dumay, ayaa kooxdii 7000-ee xoogga eey ee roondooyinka ahaa la kala firdhiyey. Qaar badan oo eeyahaas ka mid ah waxaa la siiyay guryo cusub oo reero leh oo ku baahsan Jarmalka. Taranka taxaddarka leh ee Jarmalka ayaa ilaalinaya mustaqbalka eeygan taxaddar badan oo madax-bannaan. Waxay u egtahay in kolba sida ay caan u yihiin ay u kororto, kuwa soosaara ay si xushmad leh u soo saari doonaan qaar ka mid ah shakhsiyaadka ugu daran ee difaaca.
Ilaalada Flock, AKC Shaqaynta
Vastelin oo ah Sheepdog Caucasian ah oo 2 jir ah— 'Kani waa eeygeyga labka ah ee la yiraahdo' Vastelin ', daahir Caucasian Sheepdog ah oo ka yimid qaar ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan adduunka ee dhiiga qaada Russia. Wuxuu ku guuleystay wakiilkii ugu fiicnaa ee cayaaraha eey ee Moscow. Vasil, sida had iyo jeer loogu yeero, waa nin jilicsan oo aad u deggan marka uu banaanka joogo, ama, ka baxsan waajibaadkiisa ilaalinta. Wuxuu ku raaxeeyaa raacitaanka baabuurta, socod dheer, sawir qaadashada, xitaa kuwa aan la aqoon, iyo soo jiidashada indhaha meelaha dadweynaha. Taas bedelkeeda, Vasil waa eey aad iyo aad u daacad ah oo eey ilaaliya marka ay timaado ilaalinta meeshiisa iyo xubnaha qoyskiisa. Vasil wuxuu ku sugan yahay Nigeria, qolka aan ku xanaaneeyo ee 'PetLoveKennels'. Wuxuu ku hawlan yahay barnaamijyo taranta qaar ka mid ah dumarkeenna ugu fiican, sidoo kale wuxuu ka socdaa Ruushka. Wuxuu si dhaqso leh ula qabsaday markii uu yimid Nigeria. Sawirrada waxaan ku qaaday magaalo u dhow Moscow markii uu jiray 2 sano. '
'Kani waa ardaygeenna qaaliga ah ee loo yaqaan' Caucasian Shepherd 'oo magaciisu yahay Genghis oo halkaan lagu muujiyey isagoo jira 4 bilood. Wuxuu jecel yahay inuu waqti la qaato carruurteenna Accra, Ghana. '
'Laba caruur ah oo 3 bilood jir ah oo qurux badan oo Caucasian Shepherd ah ayaa la kala yiraahdaa Kane iyo Abel. Waxay jecel yihiin inay banaanka ku ciyaaraan. Waxaan ku nool nahay Accra, Ghana. '
'Annaga iyo 2-da Adhijirka ah ee Caucasian-ka ah eey ku sugan tahay magaalada Accra, Ghana.'
Adult Caucasian Shepherd oo culeyskiisu yahay 92 kg (breeder TA Yagodikna, Russia), ixtiraam sawir leh Petlove Kennels
Kamaz oo ah 3 bilood jir lab ah oo Caucasian Shepherd ah - 'Ina Atac ku xigeenkii adduunka ee 2006, horyaalkii Yurub 2006, Grand champion of Russia, champion of Finland, Poland, Bulgaria, Moldovia, iwm. Tarankaana waa Tatiana A. Yagodikna (Russia)' sawir iska leh Petlove Kennels
Kamaz oo ah wiil bil-jir ah oo Caucasian Shepherd ah, oo sawir leh waxaa leh Petlove Kennels
Michael ninka reer Russia Caucasian ee 1 1/2 sano jir ah kuna nool Hindiya— 'Michael waa eey aad u bulsheed, daryeel badan oo deggan, haddana aad u ilaaliya. Beerteenu uma baahna qalab kale oo amni ama shaqaale. Raggayaga iyo dumarkayaga reer Caucasians ayaa ku filan inay ilaashadaan dhammaantood. '
Halyeeyga Caucasian Anchara wuxuu u dhashay Yelena Levitina oo ka tirsan Caucasian Legen iyadoo 2 1/2 sano jir culeyskiisu yahay 120-125 lbs. Way jeceshahay oo ay leedahay BabsT. Anchara waa qof aan aqoon lahayn, daacad ah, ilaaliya xasilloon, aan baqdin lahayn, xubin qurux badan oo ka tirsan qoyskayga.
Bey cadaan ah Caucasian Shepherd Dog oo 2 jir ah— 'Shinnidu aad ayey u deggan tahay haddana waa eey aad u firfircoon. Waxay kaligeed dabooshaa 5 hektar oo beeraheena ah maalintii oo dhan si fudud. Iyadu waa qof aad u deggan oo dabacsan laakiin waxay neceb tahay kuwa xadgudubka sameeya, eeyga kaamil ah. Waan jecel nahay Bee. '
Eeg tusaalooyin dheeraad ah ee Eyga Shepherd Dog
Caucasian Shepherd Dog Sawirada 1
Caucasian Shepherd Dog Sawirada 2
Caucasian Shepherd Dog Sawirada 3
waa maxay alaskan husky
shih tzu iyo yorkie eeyo yaryar oo isku dhafan
Belgian malinois husky iskudir iib ah
chesapeake bay retriever iskudhafka ka hortagga dahabiga
sawirada ey cur
madow afka cur nooc info